Live Blackjack လမ်းညွှန် - PlayJack Live (2022)
Main	/ Variations	/ Live Blackjack ကိုကစားပါ
Blackjack ၏ဂိမ်းလျှင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်။ ယနေ့တွင် Live Blackjack သည်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Blackjack Online ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနေစဉ်အတွင်းစည်းမျဉ်းအချို့ကိုပြောင်းလဲနေစဉ်အတွင်းဂိမ်းအများစုသည်နဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြည့်ရအောင်။
တိုက်ရိုက်အနက်ရောင် Blackjack ၏အခြေခံ
Live Blackjack ဂိမ်းနှင့်သင်အွန်လိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခြားဗားရှင်းများအကြားကွဲပြားခြားနားသည်မှာများစွာရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အဓိကကွာခြားချက်မှာသင်သည်တိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ၏ကုမ္ပဏီတွင်ကစားခြင်းနှင့်အဝေးမှကစားခြင်းကိုအဝေးမှကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်, မှတ်သားရမည့်အချက်များဒီမှာ။
Live Blackjack ကိုအိမ်ဆန့်ကျင်ကစားသမားနှင့်ကစားသည်
တစ်ခုချင်းစီကိုဂိမ်းနှစ်ခုနှင့်ရှစ်ကုန်းပတ်အကြား feature လိမ့်မယ်
နောက်တစ်ခါထပ်ခါတလဲလဲ busting မပါဘဲ 21 မှတ်ရရန်ရှိသည်
ဆယ်ယောက်မှကဒ်အားလုံးသည်တစ် ဦး သို့ကဒ်အားလုံးတွင်ရမှတ်တစ်ခုစီအတွက်တန်ဖိုးရှိသည်
အခြေအနေပေါ် မူတည်. Ace သည် 1 သို့မဟုတ် 11 မှတ်တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်
ဒီမှာမှတ်သားဖို့အခြားအသေးစားကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ရှိပါတယ်။ Live Online Blackjack ဂိမ်းများသည်ကစားသမား၏ကဒ်များအတွက်ကာစီနိုပေါ် မူတည်. စည်းမျဉ်းနှစ်ခုရှိသည်။ သူတို့ကရင်ဆိုင်ရသို့မဟုတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး Live Blackjack လောင်းကစားရုံဆိုဒ်များ
Live Blackjack ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် LiveBlackjackjack ၏အခြေခံများကိုရှင်းလင်းစွာဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်. သင်အမှန်တကယ်မည်သို့ကစားသည်ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ Blackjack Online Play ကိုသင်ကစားနိုင်သည့်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်မျှသာညှိနှိုင်းမှုအချို့ရှိပါသည်, သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကြည့်ရအောင်။
သူ၌သဘာဝအနက်ရောင် blackjack (10-point card + ACE) ရှိလျှင်ကစားသမားတစ် ဦး သည်လုံးလုံးလျားလျားအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အကယ်. ကစားသမားနှင့်ရောင်းဝယ်သူသည် Blackjack တွင် Blackjack ရှိခဲ့လျှင်ဂိမ်းသည် "တွန်းအားပေး" ဖြစ်သည်။
ပါတီများအနေဖြင့်သူတို့လက်များသည် 21 မှတ်ထက်ကျော်လွန်သည်
သို့သော်ကစားသမားတစ် ဦး ၏ကန ဦး လက်သည် 21 မှတ်ထက်နိမ့်ပါက၎င်းတို့မှကွဲပြားသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများစွာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အမှန်ကတော့ကစားသမားများကသူတို့ရိုက်နှက်လို, မတ်တပ်ရပ်, နှစ်ဆခွဲ, ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီအတွက်အကျဉ်းရှင်းပြချက်တစ်ခုပါ။
နှစ်ဆ: ကစားသမားသည်4င်းတို့၏ကဒ်များကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးအလောင်းအစားနှစ်ခုကိုနှစ်ဆတိုးမြှင့်လိုသည်။
လက်နက်ချ: ကစားသမားတစ် ဦး သည်အနိုင်ရရန်နည်းလမ်းမမြင်နိုင်ပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လောင်း၏ထက်ဝက်ကိုလက်နက်ချနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသည်နှင့် Blackjack Online Live ၏ဂိမ်းသည်ဒုတိယကဒ်ကိုလက်ခံရရှိသူနှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ ဒီနေရာမှာအချက်ပြဖို့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စည်းမျဉ်းတွေရှိတယ်။
ပိုမိုတိုက်ရိုက် Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
Live Blackjack ၏ဂိမ်းကိုအနိုင်ယူရန်သော့ချက်မှာ၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်. သင်တတ်နိုင်သမျှရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရာများစွာရှိသည်။ Blackjack Online Live Dealer သည်ဂိမ်းအများစုနှင့်မတူပါ။ Live Blackjack အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
တိုက်ရိုက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် Blackjack ၏ဂိမ်းကို Decks မှရှစ်နာရီအထိကစားသည်
ကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးသည်လက်ဖြင့်တန်းတူရှိပါကဂိမ်းသည်တွန်းအားပေးလိမ့်မည်
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည်အမြဲတမ်း 16 မှတ်ရရှိသောလက်ကိုအမြဲတမ်းထိလိမ့်မည်
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် 17 လက်ဖြင့်ရပ်တည်လိမ့်မည်
ကစားသမားတစ် ဦး လျှင်တစ်ကြိမ်ခွဲနိုင်ပါသည်
သို့သော် Player သည် 10 မှတ်တန်ဖိုးရှိ 4s, 5s သို့မဟုတ်ကဒ်များကိုခွဲခြားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ
ကစားသမားများသည် 9, 10 နှင့် 11 တို့ဖြင့်နှစ်ဆတိုးနိုင်သည်
အကယ်. အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး တွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပါကကစားသမားများသည်လက်နက်ချနိုင်တော့မည်မဟုတ်
အွန်လိုင်း Blackjack တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သူသည်ကျောက်တုံးများကိုထွင်းထုထားသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ဤစည်းမျဉ်းအချို့ကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားစေရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာသင်အတွက်အွန်လိုင်းကာစီနိုသည်သင်စတင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုစီနှင့်မည်သည့်မျှော်လင့်ရမည်ကိုအသေးစိတ်စာရင်းဖြင့်သင့်အားအမြဲတမ်းတင်ပြလိမ့်မည်။
Live Blackjack Payout ဂိမ်းဘယ်လိုနေလဲ။
ဤနေရာတွင်ငွေပေးချေမှုသည်အမှန်ပင်လိုက်လျှောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏ငွေပေးငွေအတွက်ငွေကြေးအတွက် 1း1 ဖြစ်သည်။ Blackjack က 3:2ကိုပေးလိမ့်မည်။
Live Blackjack မဟာဗျူဟာ - ဘာသိရလဲ
နားလည်နိုင်သည်မှာသင်သည်တိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်သူ Blackjack ကိုကစားခြင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လိုသည်။ ပျမ်းမျှအိမ်သမ္မတသည် 0.42% ရှိပြီးအသေးစားစည်းမျဉ်းအချို့ရှိနေသော်လည်းအတော်အတန်အကျိုးရှိသည့်ပျမ်းမျှအားသာချက်မှာအတော်အတန်အားသာချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအိမ်သည်ကုန်းပတ်4မှ 8 လုံးအကြားရှိသည့်ဂိမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
Live Blackjack ကုန်သည်ဖွင့်စက်ကစားရန်ရှာဖွေနေသည့်အခါစိတ်ထဲထားရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ စတင်သူများအတွက်ကားရောင်းဝယ်ရေးကို 11 နှစ်ထပ် ခွဲ. နှစ်ဆတိုးချင်သည်မဟုတ်။ သို့သော် 9, 10, 11 တွင်နှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။
နှစ်ဆလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ခြင်းတို့သည်အထူးသဖြင့်သင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုဆန့်ကျင်နေလျှင်,